“प्रधानमन्त्री बनेपनि, देउवा तत्काल, वालुवाटार नसर्ने, ज्योतिषले कहिले, निकाले साइत ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“प्रधानमन्त्री बनेपनि, देउवा तत्काल, वालुवाटार नसर्ने, ज्योतिषले कहिले, निकाले साइत ?
“काठमाडौ । बुधवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि शेरवहादुर देउवा केही दिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा वालुवाटार नसर्ने भएका छन् । उनी साइत हेराएर केही दिन पछि मात्र वालुवाटार प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।”
“नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा ग्रह नक्षत्रमा धेरै विश्वास गर्ने नेताका रुपमा मानिन्छन् । उनलाई ज्योतिषले उनको जिवनमा ७ पटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ ।”
“सो कुरालाई लिएर अहिले पनि उनको ब्यग्यं गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि पनि उनको ग्रह नक्षत्रका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।”
“उनको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कस्तो कार्यकाल रहन्छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी गर्दै केही ज्योतिषहरुले अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । सुनिल सिटौला लगाययत केही ज्योतिषहरुले उनको कार्यकालका बारेमा केही भविष्यवाणी गरेका छन् ।”
“त्यसैले पनि सायद उनी दिन हेराएर बालुवाटार सर्न लागेको हुनसक्छ । उनी दुई चार दिन पछि मात्र वालुवाटार सर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बुधवार आफ्नो निजी निवास बाल्कोट सर्ने भएका छन् ।”
“सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्दै शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि ओलीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकाल सकिएको हो । उनी अब वालुवाटार छोडेर बाल्कोट स्थित नीजि निवास सर्ने भएका हुन् । त्यसको साइत बुधवारका लागि सरेको हो ।”
Previous “प्रधानमन्त्री ओली,ले देशबासीका नाममा, सम्बोधन गर्ने”
Next “ओलीले जाँदाजाँदै ,गरे यस्तो घोषणा, दिए चे’तवानी”
“केपी ओली,लाई धक्का : प्रभु साहले नेकपा, ब्युँताउने, ५१ सदस्यीय, कमिटी तयार”
“परमादेश जारी!गर्ने पाँचै जना, श्रीमानले ,राजीनामा, दिनुपर्छ : ओली”